गहुँतले ल्यायो खुसी- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
गहुँतले ल्यायो खुसी
जेष्ठ २२, २०७६ वीरेन्द्र केसी
अर्घाखाँची — कतारमा पुगेर उनले कठिन काम गरे । सोचेजस्तो भएन । तीन वर्षपछि फर्कंदा गाईभैंसीको पिसाब (गहुँत) को बेग्लै महत्त्व रहेको गाउँघरमा बुझ्न पाए । उनले भकारो सुधार गरे ।
अर्घाखाँचीको भगवतीमा भकारो सुधार गरी पशुमूत्र संकलन गर्न बनाइएको र जम्मा गर्ने ट्यांकी । तस्बिर : वीरेन्द्र/कान्तिपुर
पिसाब ड्रममा संकलन गरी अन्नबाली, बोटबिरुवा, फलफूल र तरकारी बारीमा राख्न थाले । यसले उत्पादन तेब्बर भएपछि फेरि कतार जाने सोच बदलेका छन् भगवतीका विकास पाण्डेले । त्यही बारी हो, वर्षदिन दुःख गरेर ६ महिनालाई खान नपुग्दा उनी रोजगारी खोज्दै कतार पुगेका थिए । तरकारी र दूधले अहिले उनलाई यहीं स्वरोजगार बनाएको छ । ‘पाखोबारीमा गहुँतले जीवन नै परिवर्तन गरिदियो,’ उनले भने ।
भगवतीकै धर्मराज पाण्डेले गाईभैंसीको पिसाब खेर जान दिंदैनन् । भकारो सुधार गरी पिसाब बगेर भाँडोमा जम्मा हुन्छ । ड्रममा राख्छन् । १५ दिनमा एक भाग पिसाब चार भाग पानीमा घोलेर बोट–बिरुवामा राख्छन् । बोट–बिरुवा हलक्कै हुर्किन्छन् । उत्पादन तेब्बर दिन्छ । गहुँ, मकै पनि राम्रै फल्छ । त्यसभन्दा फाइदा तरकारीबाट हुन्छ । गहुँत राख्दा काँक्रो, लौका, घिरौंला, सीमी लटरम्मै फलेका छन् । गहुँत र गाईंभैंसीको मलले अहिले बारी सुध्रिएपछि उत्पादन तेब्बर भएको उनले सुनाए । एकै वर्षमा १० लाख रुपैयाँका काँक्रा उनले गुल्मी सदरमुकाम तम्घास पठाए ।
यहाँका बाबुराम पाण्डेले गाईभैंसीको पिसाब कृषकका लागि अमृत भएको बताए । बोट छिटो हुर्किने, फल लाग्ने र उत्पादन तेब्बर भएपछि उनी हौसिएका हुन् । पाखोबारीमा अन्न धेरै फल्न थालेपछि परिवार पाल्न सजिलो भएको उनले बताए । तीन वर्षदेखि उनले गाईभैंसीको पिसाब संकलन गरिरहेका छन् ।
साना घुँघा हाल्ने मकैका बोटले गहुँत राखिदिएपछि दुई/तीनवटासम्म घुँघा हाल्ने र दाना पनि पोटिला भएको पाण्डेले सुनाए । ‘खानलाई पनि स्वादिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘गहुँ र धानका बाला पनि राम्रा लागे ।’ गहुँतले उत्पादन तेब्बर भएपछि कृषकहरू पशु थप्ने र पिसाब जम्मा गरेर खेतीपातीमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । अर्गानिक खाद्यान उत्पादन गर्ने यो सजिलो तरिका भएको घोचेखोलाकी जानका बन्जाडेले बताइन् । ‘उत्पादन पनि तेब्बर भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक मुरी धान र मकै फल्ने खेतमा तीन मुरीसम्म फलेको छ ।’
गाईभैंसीबाट धेरै पिसाब झार्न अहिले यहाँका किसानले बस्तुभाउलाई पानी धेरै खुवाउन थालेका छन् । ‘खेतमा सिंचाइ गर्दा कुलोको पानीमै गहुँत बगाइदिने गर्छौं,’ धनचौरकी धनिश्वर घर्तीले भनिन्, ‘थोरै गहुँतले काम नगरेपछि अहिले बस्तुभाउलाई टन्न पानी ख्वाउन धेरै पिसाब झार्न थालेका छौं ।’ गहुँत हालेर उत्पादन भएको खाद्यान्न मिठो र स्वादिष्ट हुने उनले बताइन् ।
नयाँ संरचनाअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले केही कृषकका घरमा भकारो सुधार गरेको थियो । स्थानीय तह बनेपछि जनप्रतिनिधिले पनि यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । अहिले तरकारी जोन कार्यालयले सन्धिखर्क नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिका–५, बाँगीमा भकारो सुधार कार्यक्रम गरेर पिसाब संकलन गरी अन्नबालीमा राख्न सिकाएको छ ।
जोन प्रमुख बुद्धिराम भट्टराईका अनुसार पिसाबमा तीन प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ । पिसाब राखेका बोट–बिरुवालाई रोग र किराले कम आक्रमण गर्छन् । अहिले यहाँका ७० कृषकको घरमा भाकारो सुधार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । १२ हजार जोनको अनुदान र ३ हजार रुपैयाँ कृषकको लगानीमा भकारो निर्माण गरिएको उनले बताए ।
पिसाब संकलन गर्न भकारो सुधार कार्यक्रम बनाएर जनप्रतिनिधि अघि बढे कृषिबाट समृद्ध पालिका बन्न धेरै समय नलाग्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी रामबहादुर रायमाझीले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ ११:२४
जेष्ठ २२, २०७६ मधु शाही
बाँके — सरासर पढदा ६ वर्षमा ‘एमबीबीएस’ अध्ययन सकिन्छ । कैलालीका एक युवक साढे नौ वर्षदेखि डाक्टरी पढिरहेका छन् । पढ्दै फेल हुनु उनको जीवनशैली बनेको छ । डाक्टर बन्नु उनको रोजाइ पनि होइन । धनाढ्य परिवारका उनलाई जसरी पनि चिकित्सक बन्न दबाब छ । यस्तो दबाब थेग्न नसकेर उनी लागूऔषध दुर्व्यसनी बनेका हुन् ।
कोहलपुर मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत उनलाई लागूऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले खोजिरहेको छ । उनलाई प्रहरी प्रशासनले ‘मुन्नाभाइ एमबीबीएस’ उपनाम दिएको छ ।
हिन्दी चलचित्र ‘मुन्नाभाइ एमबीबीएस’ मा नायक सञ्जय दत्तले मेडिकल कलेजमा पढ्दै फेल हुँदै बस्ने पात्रको अभिनय गरेका छन् । त्यही स्वरूप यहाँका मेडिकल कलेजका देखा परेको छ । यहाँका ‘मुन्नाभाइ’ ले मानवीय काम गरिरहेका छ्रैनन् । उनीहरू लागूऔषधको चंगुलमाफसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो महिना लागूऔषध मुद्दामा चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका चार विद्यार्थी मुछिएका छन् । प्रहरीले तीन जनालाई हिरासतमा लिएको छ । एक फरार छन् । लागूऔषधमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी फसेको आशंका प्रहरीले गरेको छ । पछिल्ला चार मुद्दाले सचेत बनाएको एसपी अरुण पौडेलले बताए ।
मेडिकल कलेजमा थप अनुसन्धान र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना उनले सुनाए । पक्राउ परेका विद्यार्थीले बयानमा ‘फ्रस्टेसन’ का कारण लागूऔषध सेवन गरेको खुलाएका छन् । परिवारले जबर्जस्ती डाक्टर बनाउन खोज्दा दबाबमा परेको उनीहरूले बताए । तनावले गर्दा मन भुलाउन उनीहरूले कुलतको बाटो रोजेको डीएसपी प्रकाश सापकोटाले बताए ।
फ्रस्टेसनको कारण ?
इच्छा इन्जिनियर बन्ने थियो । अभिभावकले डाक्टर बनाउने सपना देखे । स्कुल पढ्दादेखि डाक्टर बनाउने भन्दै दबाब दिन्थे । कैलाली घर भएका ती युवकको इच्छा कसैले सुनेनन् । अभिभावककै जोर–जबर्जस्तीमा उनी मेडिकल कलेजमा भर्ना भए ।
चौथो वर्ष अध्ययरत उनले किताबका अक्षर त घोके तर कहिल्यै रमाएर पढेनन् ।
इच्छा एउटा, पढाइ अर्कै भयो । यसले उनमा विचलनभाव आयो । साथी–संगतमा लागेर मन भुलाउन लागूऔषधको बाटो रोजे । केही महिनाअघि उनी र मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत भारतीय युवक लागूऔषधसहित पक्राउ परे ।
सीमापारिबाट ल्याउने क्रममा नेपालगन्ज नाकास्थित जमुनामा उनीहरू समातिएका थिए । प्रहरीको बयानमा ती युवकले इच्छाविपरीत पढाइमा दबाब आएकाले मन बहलाउन लागूऔषध सेवन गर्न थालेको बताएका छन् । भारतीय युवक फरार छन् । काठमाडौं घर भएका एक युवक पाँच वर्षदेखि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छन् । डाक्टर बन्ने रुचि थिएन ।
पूर्वसुरक्षाकर्मीका छोरा हुन् । पढाइमा मन पटक्कै लागेन । फेल हुँदै बस्दै गर्न थाले । तर, परिवारले भने पैसा पेलेर भए पनि पढाइ पूरा गर्न दबाब दिइरहेका हुन्थे । लागूऔषधकै मुद्दामा उनी अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
डीएसपी सापकोटाले अधिकांश युवा आफ्नो रोजाइ अनुकूल अध्ययन गर्न नपाउँदा फ्रस्टेसनमा आएर लागूऔषधका अम्मली बनेको बताएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा उनले अभियुक्तको बयानमा यस्तै भेटिएको सुनाए । ‘परिवार र समाजले युवाको चाहना बुझ्ने कोसिस गरेको छैन,’ उनले भने, ‘जसको असर लागूऔषध दुर्व्यसनमा देखा पर्न थालेको छ ।’ इच्छा एउटा, पढाइ अर्कै हुँदाको नतिजा के हुन्छ ? विद्यार्थीको मनमा विचलन आउँछ । यसले समाजमा अनेक विकृति निम्त्याउँछ ।
यसको उदाहरणका रूपमा यतिबेला लागूऔषधका मुद्दामा परेका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी देखा परेका छन् । जिल्ला प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि हरेक दिन एउटा लागूऔधषविरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रशासनकै तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३२ प्रतिशतले लागूऔषधको मुद्दा बढेको तथ्यांक छ ।
लागूऔषध नियन्त्रणका लागि परिवारदेखि सचेत हुन जरुरी छ । आफ्ना छोराछोरीको भावना सम्बोधन गर्नु, कस्तो संगतमा लागेको छ, निगरानी गर्नु र अभिभावकले छोराछोरीमा मित्रताको भाव बढाउन सके युवा कुबाटोदेखि जोखिममुक्त हुने एसपी पौडेलले सुनाए । लागूऔषध नियन्त्रण नहुनुको अर्को ठूलो कारण खुला सिमाना हुनु हो ।
सीमापारि सस्तो र सजिलै लागूऔषध पाइने हुँदा युवाले झुक्याएर ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । बाँके जिल्लामा लागूऔषधका मुद्दा बढ्दो क्रममा छन् । ०७३ मा ९७ वटा मुद्दा परेकामा ०७४ मा बढेर १ सय ३७ पुगेको थियो ।
त्यस्तै, ०७५ मा १ सय ४५ मुद्दा दर्ता भए भने ०७६ वैशाख मसान्तसम्म यो संख्या बढेर १ सय ९२ पुगेको छ । प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार जेठ महिनामा मात्रै बाँकेमा लागूऔषधसहित ५४ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ ११:२२
द्वन्द्वपीडित बालबालिका छात्रवृत्तिबाट वञ्चित
नौमुरे बहुउद्देश्यीय फरियोजना : अध्ययनमै पाँच वर्ष
विचित्र गुफामा पर्यटकीय योजना
सैनिक परिवारलाई तालिम र सहायता
प्रदेश ५ को सभाले पारित गर्‌यो शोक प्रस्ताव